Uri Wakaneta Kubva Kunotsvaga Engjini Kunyorera Site Yako? - Vadzivisei Semalt!
Injini dzinotsvaga dzichishandura magadzirirwo avo anenge zuva rimwe nerimwe uye izvi zvisizvo hazvisi zvakanaka nguva dzose kune webmaster uye blogger. Kune nguva dzose mukana wekuti webhusaiti yako icharambidzwa nekuda kwekutsvaga kutsvaga injini mazano. Pamusoro peiyo, maitiro avo e-geo-chaiwo uye maitiro angangodaro anokanganisa. Zvakanaka kudzivisa mawebhusayithi akawanda kubva kuGoogle, Bing, uye Yahoo tsvaga tsvaga kuitira kuti ma webhu ebhizha enyu aratidze nyore nyore. Jason Adler, Mutengi weKuteresi Achibudirira ( Semalt , anoti tinoonga, kune dzimwe nzira dzekudzivirira dzimwe mawebhusayithi kubva mumigumisiro yekutsvaga - minky decke. Zvimwe zvacho zvakakurukurwa pasi apa.
Kuumba webhusaiti yepawebsite mabhuku ekuGoogle Chrome iri nyore seABC. Nokuda kweizvi, unofanirwa kuisa kuwedzera kweGoogle; kana yaiswa, iwe uchaona sarudzo yekuvhara nzvimbo kana URL dzinokugumbura kazhinji uye kusundira nzvimbo yako shure kumashure ekutsvaga kweGoogle. Kana ukangodonha paChikwata cheBlock, mawebsite acho achaparara pakarepo kubva mumigumisiro yeGoogle. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti nzvimbo idzi dzinowanikwa mumigumisiro yekutsvaga ye Yahoo neBing, zvinoreva kuti haugone kuvadzivisa kubva kune dzimwe injini dzinotsvaga uchishandisa nzira iyi.
2. Chengetedza musha wezvino wekutsvaga injini dzakadai saGoogle.com:
Zviri nyore kubvisa munhu aripo zvino kubva kuGoogle..com. Kana uine chikamu cheGoogle Chrome's Zvirongwa zvakasununguka, unogona kudzivirira mawebhusayithi evanonyunyuta kana evanhu vakuru kuburikidza neBlockIt button. Uye kana iwe ukanyora paZvinyarudzo, mawebsite akafanana achawanikwazve mumigumisiro yako yekutsvaga kweGoogle.
Kana uchida kuona mazita emasayiti akavharidzirwa munguva pfupi yapfuura, iwe unongoda kuvhara kuBlocklist icon mubhairidzi. Izvi zvinowanzooneka mumuchena wearanduni uye ine ruoko rwekutsvaga.
3. Webspam Report Report plugin:
Kunze kwezvirevo zviviri zviri pamusoro apa, Webspam Report Report plugin zvakare yakanaka kuenda nayo. Izvi zvinokubvumira kuti ugove nhepfenyuro yemashupiti uye evanhu vakuru se spam. Chaizvoizvo, ndiyo inyore uye yakanakisisa sarudzo sezvo iwe unogona kureva mawebhusayithi akawanda uye mabloggi panguva imwe chete. Kana sarudzo dze spam dzakatumirwa kuGoogle, injini yekutsvaga ichapedzisira ichinyora uye ichivhara nzvimbo kubva pamigumisiro yayo.
Nekuwedzera uku, unogona kudzivisa zvose zvisingadadi uye zvinokanganisa kubva kuGoogle yekutsvaga injini. Zvinosuruvarisa, iyi plugin haishande zvakanaka neS Safari nemamwe vashandisi vewebhu. Zvinoreva kuti iwe unogona kuzvishandisa chete kana iwe uchishambadzira mawebsite kuburikidza neGoogle Chrome uye une browser ino seyoyo huru.
Kana uri muchengeti weFoodfox, zvinogona kuisa zvakafanana zvinyorwa zvinodzivisa nzvimbo dzose dzisina kudiwa kubva mumigumisiro yekutsvaga. Somuenzaniso, kana iwe une WordPress site, unogona kutarisa plugin inobatsira kudzivirira nzvimbo dzisingadikanwi kubva kumigumo yekutsvaga Firefox. Kana uchangobva kuiswa zvakakwana, unogona kushandura purogiramu uye kudzivisa kana kubvisa masayiti nemabloggi zvausingadi kuratidzira mumigumisiro yako yekutsvaga kweGoogle.
Nzira idzi dzose dziri nyore kutevera nekubudirira kune marudzi ose emawebsite, blogs, uye mapeji ezvehuwandu hwevanhu.